သင်၏မိသားစုဆရာဝန်ချိန်းဆိုမှုမှအများဆုံးရယူရန်နည်းလမ်း ၁၂ ခု | Santotoro
လူများတို့သည်ဤအချက်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့သင်အမှန်တကယ်ရပ်တန့်ခဲ့ပြီလား။ အဖြေကသိပ်မကြာပါဘူး သင်၏အမည်ကိုခေါ်သည့်အချိန်နာရီစတင်မည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ ၁၀ မိနစ်အတွင်းတွင်သင့်ဆရာ ၀ န်၏အခန်းထဲသို့လမ်းလျှောက်သွားခြင်း၊ သင့်အင်္ကျီကိုချွတ်ခြင်း၊ နောက်မှထပ်မံပြောဆိုခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ထွက်ခွာပြီးနောက်သင့်ဆရာဝန်သည်သင်၏မှတ်စုများကိုရေးသားခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတောင်းဆိုခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လူနာ ၂၀ အားခွဲစိတ်ကုသရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နောက်ထပ်မိနစ် ၂ ခုမျှသာအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏နောက်ဆုံးလူနာထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင့်အားနာရီဝက်ကျော်ကြာမြင့်စေနိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏သွားများကိုခြစ်နေစဉ်တွင်ဤအရာကိုမှတ်ထားပါ။ စောင့်ဆိုင်းခန်းထဲမှာ။
ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်ငါဆရာဝန်တွေအမြဲတမ်းနောက်မှပြေးတယ်သိတယ် ဒါအရမ်းမှန်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အချိန်တွေကုန်သွားရင်အရေးမကြီးတဲ့အချိန်တွေမဖြုန်းပါနဲ့။ အချို့ဆရာဝန်များသည်“ ပထမဆုံးလာပြီးပထမ ၀ န်ထမ်းဆောင်သောမူဝါဒ” ကိုကျင့်သုံးသည်။ ဒါကြောင့်မင်းကမိနစ်အနည်းငယ်နောက်ကျရင်တောင်နောက်လူကသင့်ကိုအတိတ်ကအမြန်ခေါ်သွားပြီးအရင်မြင်ဖူးလိမ့်မယ်။ သတိပေးခံရ
ကျွန်ုပ်တို့၏ NHS ကိုဆန့်ထားကြောင်းလူတိုင်းသိပြီးမည်သူမျှသူတို့၏ဆရာဝန်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးရန်စိတ်မရှိကြပါ။
သင်၏လက်မောင်းပေါ်တွင်ကြီးမားသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုဆရာဝန်ပြရန်မလိုအပ်ပါကအကာအရံများနှင့်အင်္ကျီများကိုမဖြုတ်ပါနှင့်၊ သင်၏ပြproblemsနာများကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုအသုံး ၀ င်သောတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသင်ဖြုန်းတီးနေသည်။ သင်၏လှပသောကလေးငယ်မှအလွှာများကိုချစ်ခင်စွာနှင့်ဂရုတစိုက်ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏ပိန်ပြောင်းခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းလူနာတိုင်းလိုချင်သည်မဟုတ်လျှင်ဆရာဝန်၏အခန်း၌မဟုတ်, သင်နောက်မှငါးမိနစ်မလိုအပ်ဘဲအပိုဆောင်းစောင့်ဆိုင်းရန်ပြီးနောက်သင်ဆရာဝန်မြင်!
ကျွန်ုပ်သည်ဤအပြစ်အတွက်ကျိန်းသေပြစ်မှားသော်လည်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းကလေးများကိုတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ချထားရန်ကြိုးစားပါ။ မိဘများသည် Jonny ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းကိုအာရုံလွဲသွားစေသည်။ ဤအရာသည်အချိန်ဖြုန်းရုံသာမကဘဲသင့်အားအပြည့်အ ၀ အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့ကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကလေး၊ ကလေးငယ် (သို့မဟုတ်ပိုဆိုးနိုင်သည်) သို့မဟုတ် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များနှင့်ကြည့်နေသည့်ကလေးငယ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်မီးယပ်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများအကြိမ်အရေအတွက်ကိုမမှတ်မိတော့ပါ။ (အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကလေးကိုခေါ်လာပြီးသကြားလုံးများနှင့် / သို့မဟုတ်သင့် iPad) ကိုလာဘ်ထိုးလျှင်၎င်းသည်လုံးဝကောင်းပါသည်!)
ဒါဟာဟောင်းနွမ်းပေမယ့်တစ် ဦး goodie ပါပဲ။ ယနေ့လူအားလုံးစီရန်လိုအပ်နေသောတိုင်ကြားမှုများစာရင်းကိုအမှတ်မထင်မထည့်ပါနှင့်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြsoနာများစွာကိုကိုင်တွယ်ရန်မျှော်လင့်ခြင်းသည်လက်တွေ့မကျပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အခြားအရာများအပြင်၊ ပြfiveနာငါးခု (နှစ်မိနစ်အောက်မပြည့်သေးသော) ပြfacedနာတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါဆရာ ၀ န်က၎င်းကိုထိုက်တန်သောအချိန်ကိုပေးမည့်အစားအပေါ်ယံအားဖြင့်အပေါ်ယံဖြေရှင်းရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။
အခက်ခဲဆုံးပြproblemနာကိုရွေးချယ်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်မည့်အစားပြtroublနာများကြားခုန်ထွက်သွားခြင်းထက်ကြိုးစား။ ကြိုးစားပါ။ သင်၏လူနာများနှင့်လည်းမမျှတပါ၊ ၎င်းသည်ကြာကြာမစောင့်နိုင်ဘဲအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်။ သင့်တွင်ဆွေးနွေးရန်ပြtoနာများစွာရှိပါက ist ည့်ကြိုဌာနမှူးနှင့်စကားပြောပြီးနှစ်ဆရက်ချိန်းယူရန်ကြိုးစားပါ။
သင်၏ ‘ဇာတ်လမ်း’ အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီး၎င်းကိုသက္ကရာဇ်စဉ်အတိုင်းပြောပြပါ
ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုအစမှပြောပြရန်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် – ‘ဒါတွေအားလုံးဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကစပြီးငါ့ဘက်မှာနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရတယ်။ ‘ သင့်မိသားစုဆရာဝန်အတွက်သင့်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ပုံကိုပန်းချီဆွဲရန်ကြိုးစားလိုသည်။
သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာဘယ်လောက်အထိရှိသလဲလို့မေးတဲ့အခါသူကအတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျကြိုးစားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ‘ရှည်လျားသော’ ဟုပြောခြင်းသည် ‘ထာဝရပုံရသည်’ သို့မဟုတ် ‘လုံးဝမကြာရှည်’ ဟုပြောခြင်းသည်အမှန်တကယ်အကျိုးမရှိသောကြောင့်လူနာများအကြားအဓိပ္ပာယ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်နာရီ၊ ရက်၊ လသို့မဟုတ်နှစ်များအရကြာရှည်မှုအကြောင်းပြောဆိုရန်ကြိုးစားပါ။ လူတိုင်းနားလည်နိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောခြုံငုံကာလ။ အကယ်၍ သင်၏ပုံပြင်အစ မှနေ၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားလျှင်အချိန်ကုန်သက်သာသည်။
သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မည် (အမြဲတမ်းမလိုအပ်သော်လည်း) ။
ဆရာဝန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအစပိုင်း မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာလုပ်ဆောင်ရန်သင်ကြားပို့ချခြင်းဖြစ်သည်။ မိသားစုဆရာဝန်အများစုအတွက်မူ၎င်းသည်ဒုတိယသဘောသဘာဝသာဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့တာကဒီအချက်ကနောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်မှာအလွန်အရေးကြီးတယ်၊
သင်အမှန်တကယ်စိတ်ပူစရာတစ်ခုခုရှိလျှင် – ဥပမာရင်သားကင်ဆာတစ်စုံသို့မဟုတ်ရင်ဘတ်နာကျင်ခြင်း – ကျေးဇူးပြု၍ ဦး စွာဖော်ပြပါ။ လူအများအပြားကသေးငယ်သောအရာတစ်ခုနှင့်စတင်ရန်နွေးထွေးမှုတစ်ခုအကြောင်းပြောကြသည်။
တကယ်လို့ပြGPနာတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသင်၏မိသားစုဆရာဝန်ကမသိဘူးဆိုရင်၊ မင်းတို့ရဲ့ verruca ကို (၁၀- မိနစ်ခန့်) ချိန်းဆိုကြလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်ကနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုသင်သတိရမိပါက verruca သည်အနည်းငယ်အရေးမပါတော့သည်။ ရဲရဲရင့်ရင့် – သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုရှေ့တွင်ဖော်ပြပါ။
ဆရာဝန်များသည်သွားဆရာဝန်နှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟုလူနာမည်မျှယူဆသည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမအံ့သြတော့ပါ။ ဆရာဝန်များသည်သူတို့၏သွားကုသမှုဆိုင်ရာသွားဘက်ဆိုင်ရာပညာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝဘာမျှမသင်ကြားသောကြောင့်သင်ပantibိဇီဝဆေးသို့မဟုတ်အမြစ်တူးမြောင်းကုသမှုလိုအပ်မလားဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘတ်စ်ကား conductor တစ်ခုတွင် GP ဆရာဝန်တစ် ဦး အနေဖြင့်မမေးလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်ဆရာဝန်များသည်သွားဆရာဝန်မဟုတ်ကြပါ။ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သိထားသင့်သည့်ရောဂါလက္ခဏာပြလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်၏သွားများမပြပါနှင့်။
ဒါကနည်းနည်းလေးခက်တယ်၊ ဆရာဝန်တွေအားလုံးကအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်များမှာသင်၏ရောဂါလက္ခဏာသည် ‘fait accompli’ (တစ်နည်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သောအရာတစ်ခု) အနေဖြင့်မပြောပါနှင့်။ ၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးလေ့ရှိသည်။
သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်ရောဂါတစ်ခုခုအတွက်သင်စိတ်ပူလျှင်ကျွန်ုပ်ပြောပါကကျွန်ုပ်ပြောပါက (က) သင်တစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် (ခ) ကျွန်ုပ်စိတ်ချနိုင်သည် မင်းနဲ့မင်းကပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုခံစားရစေမှာပါ။
စာနယ်ဇင်း၌သင်ဖတ်ကောင်းဖတ်နိုင်သော်လည်းအများစုမှာမိသားစုဝင်များသည်သင့်ကိုကူညီရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေကြသည်။ သငျသညျအပြုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားတက်နိုင်လျှင်, ထိုသူတို့၏နေ့ရက်ကိုဖြစ်စေမည်!